Vasa waa markabka kali ah ee la hayo ee qarnigii 17’aad. Iyadoo in ka badan 95 boqolkiiba qeybihiisii orjinaalka ahaa la dhowray, oo lagu qurxiyay boqolaal farshaxanno la qoray ah, Vasa waa farshaxan keyd maaliyadeed gaar ah waana mid ka mid ah meelaha dalxiiska ugu fiican dunida.
Markabka waxaa lagu soo bandhigay matxaf loo dhisay oo ku yaal Stockholm kaas oo ay ku dhexyaalaan xattaa sagaal carwo oo la xiriiro, dukaan aad u qalabeysan iyo maqaayad heer sare ah. Filimka ku saabsan Vasa waxaa lagu daawan karaa lix iyo toban luuqadood. Matxafka Vasa wuxuu soo jiitaa booqdayaal ka badan matxafyada kale ee ku yaal Scandinavia. Way u qalantaa in aad u booqato Stockholm Vasa oo kali ah.
Markab wayn ee ahaa kuwa dagaalada, ayaa markii taariikhda ahayd 10:kii agoosto 1628 ka dhaqaaqi lahaa dekadda magaalada Stockholm. Wuxuu ahaa markab cusayb oo looga magacdarray Vasa, kaasoo ahaa gaashaankii reerkii boqortoyda [Vasa] waagaas taliska dalka haystay. Si loo xuso dhacdadaas rasmiga aheyd waxaa laga riday qoryihii ku sii jeeday dekedda ee dhinacyadeeda ku xirnaa madaafiic salaam sharaf ah.
Isla markii uu markabkii waynaa ku soo dhawaaday albaabka dekedda, dabeyl ayaa si dhaqso leh u kacday. Vasa waa ciiray laakiin hadana isagaa isasaxay mar kale. Dabeyshii labaad ayaa markabka ka dhifatay dhinaca. Biyihii ayaa ka galay meelihii qoryuhu ku xirnaayeen. Vasa hoos ayuu u quusay, iyadoo ay la socdaan ugu yaraan 30 iyo dabcan tiro gaareyso 50 ka mid ahaa 150 kii shaqaalaha ahaa. Waxay aheyd 333 sano ka hor inta Vasa aanu arag marlabaad iftiin-maalmeedka.
DIB USOO HELISTA
Anders Franzén, baare qaas ah, ayaa bilaabay in uu baaro Vasa horaantii 1950 maadkii. Ilaa yaraantiisii wuxuu u xiiso qabay haraaga markabka badda hoostiisa ku jiro ee u dhawaa guriga waalidkii ee ku yaalay Stockholm archipelago. Shipworm-kii, Teredo navalis, kaas oo ay cuntay haraagiisii alwaaxda ahaa biyaha cusbada leh, kuma kobcin biyaha cusbada leh ee Baltic. Anders Franzén wuxuu garowsaday muhiimmadda ay u leedahay xaqiiqadani maraakiibtii ku luntay Baltic, wuxuuna dib u helay Vasa 1956 dhexdiisii.
AAD BAY U WEYNEYD WAQTIGEEDII
Vasa waxaa lagu sameeyay gudaha Stockholm iyadoo uu maareynayay markab dhisaha Dutch-ka ah ee Henrik Hybertsson. Waxaa caawinayey najaariin, isku xirayaal, farshaxanno, rinjiilayaal, shiraac sameeyayaal, Blacksmiths-yo iyo ganacsato kale oo badan. Isugeyn afar boqol oo qof ayaa ka shaqeeyay Vasa.
Markabka waxaa lagu dhisay amarkii Gustav II Adolf, boqorkii Sweden. Dhismihiisu wuxuu qaatay qiyaastii labo sano. Markabku wuxuu leeyahay seddax tiir, wuxuu qaadi karaa toban shiraac, oo cabirkoodu than yahay 52 mitir laga bilaabo madaxa tiirka iyo keel-ka iyo 69 mitir oo ah laga bilaabo jirridda ilaa qaybta dambe ee markabka, miisaankiisuna wuxuu ahaa 1200 tan. Markii la dhameeyay wuxuu ahaa mid ka mid ah maraakiibta ugu awoodda badan ee abid la dhisay.
Maanta waxaanu xisaabin karnaa dhab ahaantii sida markab loo dhisayo si uu u noqdo mid qiimo ku leh biyaha dhexdooda. Markii lagu jiray qarnigii 17’aad waxay isticmaalayeen miisas leh cabir dhankasto ah kaas oo la ogaaday in uu sifiican ugu shaqeynayay xiliyadii lasoo dhaafay. Waxaanu ka ogaaney dokumeentiyadii xiligaas in qorshayaashii Vasa la bedelay shaqadii markabka lagu dhisayay markay bilaabatay ka dib.
Boqorku wuxuu doonayay in ka badan tirada caadiga ah ee qoryaha maraakiibta lagu xiro. Tan macnaheedu waxaa weeye in cabirka loo doortay markabka aaney ku habooneyn raggii markabka dhisayayna waxay qabteen karaankooda. Waxaa loo dhisay qaab dhismeed aad u sareeyo, oo leh labo barxad oo loogu tala galay qoryaha. Xagga hoose ee markabka waxaa laga buuxiyay dhagxaan waaweyn kuwaas oo looga gol lahaa in ay ku dheeli tiraan biyaha dushooda. Laakiin Vasa wuxuu ahaa mid aad u miisaan badan, oo 120kii tan ee dheelitirka loogu talagalay kuma filneyn. MAXAA VASA LOO DHISAY?
Vasa wuxuu ahaa mid ka mid ah kuwa muhiimsanaa maraakiibta ciidanka badda ee Swedish-ka. Waxay qaadeysa 64 madfac, intooda badan 24-pounders (waxay ridayeen kubado miisaankoodu gaarayo 24 pounds ama ka weyn 11 kg). Sweden waxay laheyd ilaa labaatan markab oo dagaal, laakiin ma jirin mid lahaa tirada iyo qoryaha waaweyn ee uu lahaa Vasa.Vasa siday u badan tahay wuxuu u shiraacday Poland, taas oo aheyd codawga koowaad ee Sweden sanado badan. Poland waxaa xukumayay boqor Sigismund, oo ina adeer la ahaa boqorka Swedish (waxay ka soo wada jeedeen awoowayaal isku mid ah). Sigismund wuxuu mar ahaan jiray hogaamiye ku meelgaar ah ee Sweden laakiin waa laga xayuubiyay iyadoo ay sabab u aheyd aaminsanaantiisa catholic-ga.
MARKII VASA MEEL LA SAARAY KA DIB
Dhowr sano oo diyaar garow ah ka dib Vasa waxaa dusha la keenay taariikdu markey aheyd 24kii Abriil 1961. howsha hadda taalo waxay aheyd sidii loo dhowri lahaa. Haraa markab oo biyo ku dhexjirtay waqti intaa la eg lama deyn karo iyadoo aan lala tacaalin. Markii waqtigu sii dheeraadaba alwaaxu wuu dilaaci doonaa oo burburi doonaa.Markii hore Vasa waxaa lagu buufiyay biyo iyadoo ay khuburaduna ka shaqeynayeen habkii loo dhowri lahaa. Habka dhowrista ee la doortay wuxuu ahaa polyethylene glycol (PEG), walax laga sameeyay xabag biya ku milmeyso taas oo tartiibtartiib u geleyso alwaaxa, biyahana bedeleyso. Buufinta PEG waxay socotay sanado badan.
Vasa waxaa lala helay in ka badan 14,000 alwaax debacsan ah, oo ay ku jiraan 700 farshaxan. Kuwan waxaa loo dhowray gooni gooni waxaana la dhigay meeshoodii hore ee ay uga yaaleen markabka. Howsha waxay la mid aheyd xallinta xujada ah jigsaw ballaaran.Markab dagaal oo qarnigii todobo iyo tobnaad ah ma aheyn oo kali ah mashiin dagaal, waxay ahaayeen qasriyo sabeynayo. Farshaxannada la lehay waxay leeyihiin waxyaalo caddeynayo rinjiyeyn iyo dahab ku naqshadeyn. Falanqeynta casriga ah waxay muujineysaa in lagu rinjiyeeyay midabada garish-ka ah oo humaagooda dambe uu yahay casaan. Farshaxannada waxaa ka mid ah Libaaxyo, halyeeyada biblical-ka, boqoraddii Roomaanka, maqluuqda badda ku nool, ilaahyada Giriigga iyo waxyaale badan oo kale. Danta laga lahaa waxay aheyd in lagu weyneeyo boqortooyada Swedish-ka oo lagu ballaariyo awooddiisa, dhaqankiisa, iyo danihiisa siyaasadeed.
WAA SIDEE XAALADDA VASA MAANTA?
Ilaalinta iyo daryeelka Vasa waa howl socoto. Dhowristiisu waxay aad ugu xiran tahay cimilo deggan. Intii marku ku jiray badda hoostiisa ayay boolashii birta ahaa ka daateen, taas oo ka dhigtay alwaaxa mid madow. Markii ugu dambeysay waxaa isku hayay oo kali ah batoono alwaax ah. Wasaqda biyaha dhexdooda waxay sameysay caddad badan oo sulfur ah oo dhexgashay alwaaxa dhexdiisa. Hadda sulfur-tu way ka soo baxaysaa alwaaxa iyadoo la farlgeleyso ogsajiinta si ay u sameeyaan sulfuric acid. Aashitadu waxay weerartaa alwaaxa, inkasta oo aysan waxyeello u geysaneyn soo booqdayaasha matxafka. Baaritaan laga sameeyay dhowrista waqtiga fog ah ee Vasa ayaa weli socoto.
VASA MACHINE-KA WAQTIGA
Markii Vasa quusay, waqtigii wuu qaboobay. Wixii lasoo badbaadiyay 1961 waxay ahaayeen qayb aan la taaban oo ka timid qarnigii 17’aad. Mid kasto oo ka mid ah kumanaanka walax ee laga helay waxay leeyihiin taariikh ay sheegaan. Waxaa ka mid ah lafihii shaqaalihii ka shaqeynayay, iyo waxyaalihii ay wateen iyo qalabkii markabka.
Dhoobada iyo dacda gunta hoose ku jiro ee Vasa badbaadiyayaashu waxay ka heleen lix shiraac oo aan furneyn xilligii masiibadu dhacday. Waa shiraacyada aduunka ugu faca weyn ee hadda la hayo waxayna daciif u ahaayeen sida xuubka caarada oo kale intii aan la dhowrin ka hor. Baaritaan ku saabsan wixii la helay ayaa weli socdo. Walxo qaas ah oo badan ayaa lagu soo bandhigay carwada matxafka, taas oo soo nooleysay xiligii bygone-ka iyo dadkiisii.
SOO BOOQASHADA MATXAFKA VASA
Janaayo – Maajo iyo Sibteembar – Diseembar10.00 – 17.00, Arbacada 10.00 – 20.00(Maqaayadda Vasa 10.00 – 16.00)
Juunyo – Agoosto8.30 –18.00(Maqaayadda Vasa 9.30 – 17.30)
31da Diseembar10.00 –15.00(Maqaayadda Vasa 11.30 – 14.00)
Waxaa la xirayaa 1da Janaayo, 23ka – 25ka Diseembar
Dadka waaweyn SEK 130Carruurta (0–18 sano) bilaashArdayda (ID ayaa la isaga baahan yahay) SEK 100
Soo daawashada matxafka oo Ingiriis la isugu sharaxayo wuxuu jiraadhowr jeer maalintii. Soo daawashada kooxdii 9 qof ka badan waa in hore loo ballan sadaa.
Filimka ku saabsan Vasa waxaa la fiirsadaa isagoo leh cinwaan hoosaadyo Ingiriis ah maalin kasto. Ku daawashada luuqado kale horay ayaa loo ballansan karaa. E-mail-ka ballan sashada bokningen.vasa@maritima.se
Sidaan baad u aadeysaa matxafka Vasamuseet
Matxafku wuxuu ku yaalaa jasiiradda la dhaho Djurgården, midig marka aad dhaaftid buundada la dhaho Djurgårdsbron. Cinwaanka booqashada waxaa weeye Galärvarvsvägen 14 ee Stockholm. Marka aad socod ka soo qaadid xarunta dhexe ee tareemadda ee Stockholm (Stockholms centralstation) (waxay qaadaneysaa 30 daqiiqo) ama haddii aad ka soo baxdid tareenka dhulka hoose ku socda ee maxadada Karlaplan (waxay qaadaneysaa10 daqiiqo).Tareenka yarka ah ee magaalada dhexdeeda ka shaqeeya oo lambarkiisu yahay 7 (spårvagn 7) oo ka soo baxa Sergels torg/Hamngatan oo u socda maxadada Nordiska museet/Vasamuseet.Baska lambarkiisu yahay 69 ee ka soo baxa xarunta dhexe ee tareemadda ee Stockholm ama Sergels torg oo u socda maxadada Djurgårdsbron.Buska lambarkiisu yahay 67 ee ka baxa Karlaplan oo u socda maxadada Nordiska museet/Vasamuseet.Doonta gaadiidka iyo dadka oo u socota Djurgården o oka soo baxda Slussen/Gamla stan oo xilliyada xagaaga oo kuleylka ka baxda sidoo kale Nybroplan.
Marbay aheyd goobta ugaarsiga boqortooyada, jaziiradda Djurgården hadda waa meel cajiib ah oo madadaalo leh kuna taal bartamaha Stockholm, iyadoo ay soo booqdaan malaayiin dad ah sanadkasto. Waxyaalaha ay dadka kusoo jiidato waxaa ka mid ah Skansen, matxafkii ugu horeeyay ee meel bannaan ku yaal, Junibacken eel eh buugaagta carruurta ee aadka loo jecel yahay ee leh dhaqamadii Astrid Lindgren, xaddiiqada layaabka ee Gröna Lund, matxafka Vasa, iyo waxyaalo kale oo badan.
Coaches-ka soo daawashada
Meel la dhigto couches-ka soo daawashada ayaa laga helayaa dibadda matxafka.
Gawaarida gaarka loo leeyahay
Meelaha gawaarida la dhigto way ku yaryihiin gudaha Djurgården.Waxaa ugu sahlan in aad dhigato gaariga inta aadan soo gaarin buundada — ku taal Strandvägen ama Narvavägen.